Hirving Lozano Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Hirving Lozano Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Cusboonaysiinta ugu dambeysay June 24, 2018
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta oo si fiican u yaqaan naaneyska; "Chucky". Hirving Lozano Childhood Story Story iyo Waxyaabaha Aan Laheyn Qodobbada Xogta waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, cilaaqaadka xidhiidhka, asalka qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo caddayn ah (Faahfaahin) oo ku saabsan isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay xeeladihiisa xagiisa ka hor inta uusan weerarka ka soo horjeedin iyo dhamaystiriisa caafimaad ee uu ku ciyaaro Koobka Aduunka ee FIFA 2018. Hase yeeshee, taageerayaal yar oo kaliya ayaa wax badan ka ogaanaya Hirving Lozano's Bio oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Hirving Lozano Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Hore iyo Qoyska
Hirving Rodrigo Lozano Bahena waxa uu ku dhashay maalintii 30th ee July 1995 ee loogu talagalay waalidiinta sawirada hoose. Waxa uu ku dhashay hooyadiis Ana María Bahena iyo aabihii, Jesús Lozano ee Mexico City, Mexico.
Hirving Lozano's family leeyahay xididdo ka soo jinsiga ah-Mexican ah ee ka soo jeeda Spanish. Xiriirka kubada cagta wuxuu calaamad u ahaa qoyska Lozano xaqiiqdii maalmaha hore. Madaxa qoyska, Jesús Lozano (sawirka hoos ku qoran) ayaa sannado badan xaqiijiyay in labadiisa wiil, Hirving iyo Bryan ay haystaan waxa loo baahan yahay go'aamo joogto ah si ay u noqdaan xirfado tan iyo markii ay caruurnimadooda. Waad ku mahadsan tahay dadaalka uu bixiyay, kubada cagta ayaa ugu danbeyntii ka qaaday qoyskiisa oo ka fogaaday celceliska noolaanshaha.
Xaqiiqda laga bilaabo maalmaha caruurnimadooda, Wiilashiisa, Hirving iyo Byran (sawirka hoose) waxay qabteen riyooyinkooda kubada cagta, hamigooduna ma ahan mid uun soo mara.
Lozano ayaa sanado badan u ciyaaray kubad sameeyaha 90 ee waqooyiga caasimadda ee magaalada Pachuca. Waxay ahayd magaaladan inuu u soo caan baxday, horumarinta rabitaan aad u weyn si uu ugu guuleysto oo uu kor ugu kaco da 'yartiisa kooxdeeda.
Hirving Lozano Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Nickname
Hirving Lozano oo sii waday inay caan ku noqoto naanaysta 'Chucky'taas oo aan u maleyneyno inaad ogtahay waxa macnaheedu yahay.
Naangiisa wuxuu ka soo jeedaa caangoobka Chucky oo ka mid ah 'Cunugga Caruurta' taxane filimka argagaxa. Hirving Lozano ayaa lagu soo waramayaa inuu naaneeshe ku qaatay intii uu ku jiray xirfadiisa dhalinyarada markii uu ku dhuuntay sariirta safarka wadada si uu uga cabsi qabo ciyaartoydiisa isagoo si bareer ah ugu boodaya iyaga oo leh muuqaal fajac ah.
Hirving Lozano Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Nolosha Xiriirka
sida Anthony Martial, Hirving Lozano wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa ka bilaabo da'da yar. Samaynta go'aanka guurka ee da'da hore wuxuu muujiyay qaan gaar ah iyo suurtogalnimada in caruurnimada caruurnimadu noqon karto qaybta kale.
Hirving Lozano wuxuu bilaabay inuu xiriirka ku yeesho garoonka oo uu la socdo carruurnimadiisa carruurnimada oo magaciisu yahay Ana Obregon.
Xiriirkooda waxay ka qaadeen caruurnimada caruurnimada waxayna ku degeen jacayl run ah. Labada qof ayaa la kulmay intii ay joogeen caruurta kaliya ee Pachuca halkaas oo Lozano uu kubada ku bilaabay.
Kadib markii ay sanado badan la kulmeen, waxay ugu dambeyntii ku xireen 2014 markii Lozano uu ahaa 18 sano, markii uu kulankiisii ​​ugu horeysay ee xirfadiisa kubadda cagta ka dhigay. Waxay ahayd waqti ku haboon in la qorsheeyo guurka.
Wadajir, labada jacaylku waxay leeyihiin laba carruur ah (sawir hoose). Ilmo iyo gabadhooda koowaad, Ana Daniela wuxuu ku dhashay Janaayo 2014. Hirving Lozano ee Waalidiinta ayaa si farxad leh ugu maragay dhalashadooda iyo magacaabista gabadha la jecel yahay.
Seddex sano ka dib, si sax ah ayay u socotay May 2017, Rodrigo oo ahaa wiilkiisa ugu horeeya iyo ilmo labaad ayaa dhashay. Hirving Lozano's carruurtana waxaa lagu sharraxay boqor iyo aabe aabahood (hoggaamiye dabiiciyan ah).
Hirving Lozano ayaa mar uun sheegtey tan iyo markii uu caruurtiisii ​​yimid, noloshiisu way ka duwanayd, waxaana ugu muhiimsanaa, si aad u xoogan. Ka soo qaadida sawirka hoose, muuqaal fiican oo udhaxeeya aabbaha iyo wiilka iyo hooyada iyo gabadha.
Hirving Lozano Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Hirving Lozano waa nin naafo ah oo jeclaan lahaa inuu waqti ku qaato guriga. Waxyaabaha uu jecel yahay guriga waxaa ka mid ah maydhashada suxuunta, dharbaaxinta, nadiifinta iyo ka caawinta Ana Obregon ee jikada. Waxa kale oo uu jecel yahay inuu iibsado dols for caruurta iyo isaga oo leh sidoo kale.
PSV mar mar waxay Lozano siineysaa hadiyad baabuur si ay uugu mahadceliso inaad tahay ciyaaryahankooda ugu muhimsan. Naadiga ayaa ka walwalsanaa inay muujiyaan farxada weeraryahanka ka dib markii ay ku fashilmeen gaariga si ay uga fogaadaan kooxo kale.
Lozano waa riwaayad, hal-abuurnimo, kalsooni. Waxa uu yahay qof awood u leh inuu gaaro wax walba oo uu doonayo inuu ku ciyaaro garoonka dhexdiisa. Lozano ayaa awood u leh inuu isticmaalo maskaxdiisa si uu u akhristo kulamada xitaa kooxda ugu adag. Tani waxaa lagu arkay markii ugu horeysay ee FIFA World Cup 2018 ay la ciyaaraan Germany.
Hirving Lozano Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Style of Play
Heerka FIFA ee qiimeynta FIFA (isagoo barbar dhigay FIFA 16 iyo FIFA 18) Don Balón sharax Lozano mid ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu fiican ka dib xNUMX.
Lozano waxay leedahay dhamaan sifooyinka qarkaha garbaha leh. Waa mid aad u halis ah marka la toogto ka dib marka laga gooyo dhinaca bidixda. Lozano waa mid degdeg ah ama aan laheyn kubada, waxaana uu leeyahay awood xoogan oo sax ah.
Horumarinta Lozano tan iyo markii 2018 FIFA World Cup uu ahaa mid ka mid ah dhawrista dhawaanta. Farsamadiisa ficil-celinta, feejignaan qarxa iyo wacyi-gelinta munaasabadda ayaa loo arkaa inay istaahilaan inay ka ammaanaan taageerayaasha. Hirving Lozano waa shaki la'aan, waa xulkii ugu wanaagsanaa ee adduunka ugu fiican ee xiddiga garabka ka ciyaara.
Hirving Lozano Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadida -Xaqiiqooyinka kale ee Shaqsiyeed & Xirfadaha Shaqada
Marka laga hadlayo daciifnimadiisa, Lozano waxay noqon kartaa mid is-dul-qaad ah, madax adag, madax-banaan, caajis ah oo aan caqli lahayn. Tabardarrada xirfadeed ee kubada cagta waxaa ka mid ah in isbedel lagu sameeyo inta lagu jiro ciyaaraha qaar ayna ka maqan yihiin garashada daafaca.
Lozano waxay jeceshahay Tiyaatarka, iyagoo qaadanaya ciidaha, iyagoo ku faraxsan garoonka dhexdiisa iyo inay la ciyaaraan saaxiibo.
Lozano ayaa niyadjabaya in la iska indho tiray, xaqiiqda dhabta ah oo aan la daaweyn sida boqor.
Raadinta Hirving Lozano Rikoorka qoyska, waxaa la xusay in Hirving Lozano uu yahay wiilkii ugu horeeyay ee qoyska. Wiilkii ugu horreeyey, wuxuu u tallaabay inuu raaco walaalkiis kaddib. Tani waxay ka dhigeysaa hoggaamiye dabiici ah oo dhashay.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta Hirving Lozano Childhood Story Story iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Sheekada Carruurnimada Miguel Almiron Plus Xaqiiqda Untold Biography
Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Raul Jimenez Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Keylor Navas Hooyo Sheeko Xogta Xogta Aan Laheyn
Javier Hernandez Sheeko Xeeldheer Xogta Xogta Aan Laheyn
Andy Cole Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Arturo Vidal Story Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
David Luiz Sheeko Xeelad Weyn Xogta Loo Yaqaano
Marcelo Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Alexis Sanchez Story Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Douglas Costa Caroline Sheeko Xogta Warka Xogta Leh
Dani Alves Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha